Leido Xingxuan သည် E-Commerce ၏ ထိပ်တန်း ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် SaaS ပံ့ပိုး သူ A + ရန်ပုံငွေ အတွက်ဒေါ်လာ ၁၅. ၆၉ သန်း ပိတ် လိုက် သည် – Pandaily
Leido Xingxuan သည် E-Commerce ၏ ထိပ်တန်း ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် SaaS ပံ့ပိုး သူ A + ရန်ပုံငွေ အတွက်ဒေါ်လာ ၁၅. ၆၉ သန်း ပိတ် လိုက် သည်
Jan 06, 2022, 13:23ညနေ 2022/01/08 00:15:48 Pandaily
Leido Xingxuan သည် တုန်လှုပ် စေသော e-commerce SaaS ပံ့ပိုး သူ ဖြစ်သည်ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် မကြာသေးမီက စုစုပေါင်း ယွမ်သန်း ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၅. ၆၉ သန်း) အတွက် Round A + ရန်ပုံ ငွေကို ပြီးစီး ခဲ့ ပြီဟု ကြာသပတေး နေ့က ကြေငြာခဲ့သည်။ အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူမှာ Meihua Venture Capital ဖြစ်ပြီး ပူးတွဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူမှာ Zhiming Capital ဖြစ်သည်။ ရန်ပုံ ငွေများကို အဓိကအားဖြင့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ SaaS ထုတ်ကုန် မြှင့်တင် ရေး၊ OBM ပေါက်ဖွား မှုနှင့် TikTok ၏ ပြည်ပ စျေးကွက် အပြင် အဆင် များ အတွက်အသုံးပြုသည်။
Redu Xingxuan ကို ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဤ SaaS (“ software asaservice” ) ပလက် ဖော င်းသည် တိုက်ရိုက် e-commerce ကုန်သည် များကို ၀ န်ဆောင်မှု ပေးသည်။ ၎င်းသည် အမှတ်တံဆိပ် များနှင့် အကြောင်းအရာ e-commerce ပလက်ဖောင်း များဖြစ်သော Shuttle နှင့် Quick Hand တို့ နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ အွန်လိုင်း စတင်ပြီး တစ် နှစ်အတွင်း SaaS ကိရိယာ သည် ကုန်သည် ၁၀, ၀၀၀ ကျော်နှင့် ပညာရှင် ၄၀, ၀၀၀ ကျော်ကို အစေခံ ခဲ့သည်။
Live hosting ၏ စည်းကမ်း ချက်များအရ Leidu Xingxuan သည် အလယ်အလတ် တန်းစား KOL ကို ကြီးမားသော ဒေတာ များနှင့် စံ လည်ပတ်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များမှတစ်ဆင့် “ လူကြိုက်များသော ထုတ်ကုန်များ” နှင့် “ အခမဲ့ နမူနာ များ” ကို တံဆိပ် များအဖြစ် ရွေးချယ်သည်။ Leidu Xingxuan သည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များအား စျေးကွက်ရှာဖွေရေး စီမံခန့်ခွဲမှု SaaS ကိရိယာများ၊ ဗီဒီယို တို များမှတဆင့် ထုတ်ကုန် ထောက်ခံချက် များ၊။
စီးပွားဖြစ် ရောင်းဝယ် မှုအရ Leido Xingxuan ၏ SaaS ကိရိယာ များသည် ကျွမ်းကျင် သူများအား အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှု ပေးသည်။ အရောင်းအ ၀ ယ် နှင့် ကိုက်ညီသော ကုန်သည် များထံမှ ၀ န်ဆောင် ခကို ကောက်ခံ ခြင်းဖြင့် ငွ ေရှာ သည်။ ယခုအခါ ၎င်းသည် ကုန်သည် များအတွက် SaaS tools များစွာ ကိုတီထွင် နေသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Chunyin E-Commerce သည် ကုန်သည် များနှင့် ပညာရှင်များ ကိုဆက်သွယ် ပေးသော ကိရိယာ တစ်ခုဖြစ်သည့် “ Select Alliance” ကို တရားဝင် စတင်ခဲ့သည်။ ကုန်သည် များသည်ဤ အင်္ဂါရပ် ကိုအသုံးပြုရန် လျှောက်ထား နိုင်သည်။ ဝင်ရောက် ပြီးနောက် ရွေးချယ်ထားသော မဟာမိတ် ကုန်ပစ္စည်း စာကြည့်တိုက် တွင် သူတို့၏ ကုန်ပစ္စည်း များပါဝင် မည်ဖြစ်ပြီး ကော်မရှင် လည်း တိုးလာ လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ပညာရှင်များ သည်က ုန် ပစ္စည်းများကို ရောင်းချ ခြင်းဖြင့် ကော်မရှင် တစ်ခု ရလ ို ပါက ၎င်းတို့သည် ကုန်ပစ္စည်း ကို ဦး စွာ စမ်း ကြည့် နိုင်သည်။ ထို့နောက် ဗီဒီယို များသို့မဟုတ် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်း သည် ကုန်သည် များသို့မဟုတ် ပညာရှင်များ နှင့်အ ချိန် ဇယား အတိုင်း အခြေချ သည်။
သို့သော် ကုန်သည် များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူ များအကြား ဆက်သွယ် မှုသည် ရိုးရှင်းသော ကိရိယာ တစ်ခု ထက်မက လိုအပ်သည်။ Leidu Xingxuan ကိုတည်ထောင် သူသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပညာရှင် များအကြား ဆက်သွယ်မှုကို ရှုပ်ထွေးသော နှစ် လမ်းသွား ဆက်သွယ်မှု နှင့်နှစ် လမ်း ရွေးချယ်မှု အဖြစ် မှတ်ယူ သည်။ စကား မပြော နိုင်သော အသံ သည် algorithm ကိုအဓိက အဖြစ် ယူပြီး traffic သည် အတော်အတန် ကွဲပြားသည်။ အမှတ်တံဆိပ် ၏ ဦး ဆောင် အိမ်ရှင် နှင့်တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် မှုအပေါ် တွင်သာ မှီခို ခြင်းအားဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ရောင်းအား နှင့် ထိတွေ့မှု ကိုဖန်တီး ရန်ခက်ခဲသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Zhejiang ပြည်နယ် စားသုံးသူ ကောင်စီ သည်အဓိက e-commerce တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မှု ပလက်ဖောင်း များ၏ အော်ပရေတာ များကို ဆင့်ခေါ် သည်
“ Select Alliance” ပလက်ဖောင်း စည်းမျဉ်း များအရ “ Leidu Xingxuan” သည် ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက် SaaS ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူအဖြစ် ထူးခြားသော တန်ဖိုးမှာ အိမ်ရှင် နှင့် ကုန်သည် များကို ကိရိယာ များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု များမှတဆင့် ချိတ်ဆက် နိုင်ပြီး နှစ်ဖက်စလုံး ၏ လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝ ညှိနှိုင်း နိုင်သည်။
E-commerce SaaS ပလက်ဖောင်း Shoplazza သည် ဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ C1 ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုကို ပြီးစီး ခဲ့သည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ e-commerce အွန်လိုင်း စတိုး SaaS ပလက်ဖောင်း Shoplazza သည် ဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ C1 စီးရီး ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုကို အဆုံးသတ် ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Startups Jan 21 ဇန်နဝါရီ 22, 2022
E-commerce ၀ န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ Mediabook သည် ရန်ပုံငွေ အသစ် ယွမ်သန်း ၁၀၀ နီးပါး ရရှိ ခဲ့သည်
ရှန်ဟိုင်း အခြေစိုက် e-commerce ၀ န်ဆောင်မှုပေး သူ Mediabook သည် Round A နှင့် Round A + ရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်း ယွမ်သန်း ၁၀၀ နီးပါး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅. ၇ သန်း) ပြီးစီးခဲ့သည်။
စက်မှု e-commerce ပလက်ဖောင်း Yesmro.cn သည် C ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ပြီးဆုံး သည်
စက်မှု ထုတ်ကုန် e-commerce ပလက်ဖောင်း Yesmro.cn သည်ယွမ် သန်းပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိသော C ငွေကြေး ကို မကြာသေးမီက ပြီးစီးခဲ့သည်။
Startups Jan 24 ဇန်နဝါရီ 24, 2022